प्याराग्लाइडिङको परीक्षण उडान सफल - Nari Batika
आज: | Fri, 03, Dec, 2021
३ पुष २०७७, शुक्रबार ०६:४५ मा प्रकाशित ( ११ महिना अघि) ४७२ पाठक संख्या
यहाँ प्याराग्लाइडिङको सफल परीक्षण उडान भएको छ । खुम्बु पासाङल्हामु गाउँपालिका १ खार्चेमा आज यसको सफल परीक्षण उडान भएको हो । अपराह्न १२ः१० बजे दुई हजार ६ सय मिटर अग्लो खार्चेबाट उडान शुरु गरी ३० मिनेटपछि सोही वडाको छेउघरमा अवतरण गरिएको स्थानीयवासी पासाङकाजी शेर्पाले जानकारी दिए । प्याराग्लाइडिङ पाइलट पेम्बावाङ्छु शेर्पाले आफ्नै गाउँको आकाशमा उडाउन पाउँदा खुशी लागेको बताए नेपालका विभिन्न क्षेत्रमा प्याराग्लाइडिङको उडान भर्दै आउनुभएका शेर्पाले सोलुखुम्बुका खरीखोला, वाकु र वाप्सा क्षेत्रमा यसका लागि उपयुक्त क्षेत्र रहेको बताए ।
आन्तरिक तथा बाह्य पर्यटन प्रवद्र्धनका लागि व्यावसायिकरुपमा प्याराग्लाइडिङ सञ्चालनको तयारी भइरहेको वडाध्यक्ष ङिमादोर्जी शेर्पाले बताए । सगरमाथा क्षेत्र लुक्ला नाम्चे जानका लागि सडक मार्गको नजीक पर्ने उक्त क्षेत्रमा पर्यटकका लागि प्याराग्लाइडिङ उपयुक्त हुने वडाध्यक्ष शेर्पाको भनाइ थियो ।अब यसलाई नियमितरुपमा व्यावसायिक ढङ्गले सञ्चालनको तयारी भइरहेको र यसले पर्यटन प्रवद्र्धनमा महत्वपूर्ण टेवा पुग्ने उनले बताए ।
राप्रपा महाधिवेशन ः रेखा थापाको महामन्त्रीमा उम्मेदवारी
धादिङबेशीको पशुपति मन्दिरमा आज साँझ जात्रा लाग्दै
अन्तर्राष्ट्रिय धादिङ समाजको प्रवक्तामा विशेष लोहनी
धादिङ त्रिपुरासुन्दरीमाईको मेला मंसिर १९ र २० गते लाग्ने
कांग्रेस धादिङको सभापतिमा रामनाथ अधिकारी
नेपाली कांग्रेस धादिङको १४ औ महाधिवेशनको माहोल
आईतबार लाग्ने गंगाजमुना मेलाको तयारी तीव्र
निलकण्ठ नगरपालिकाद्धारा आगमी फागुन २४ (आगमी मार्च ८) मा अन्र्तराष्ष्ट्रिय नारी दिवशको अवशरमा कार्यक्रम गरिने
ललिता निवास जग्गा प्रकरण : अख्तियारका पूर्वप्रमुख बस्नेत थुनामा
नारी जागरण केन्द्रद्धारा अब नारी बाटिका संन्चालनमा ल्याएको बारे जानकारी
मोरोक्कोमा २७ हजार अवैध आप्रवासी पक्राउ
रबात-मोरोक्कोमा सन् २०१९ मा अहिलेसम्म कुल २७ हजार ३ सय १७ जना अवैध आप्रवासीहरु पक्राउ परेका छन् ।
उनीहरु मध्ये २० हजार ११४ जना विदेशी रहेको प्रहरीले सार्वजनिक गरेको वार्षिक प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
सन् २०१९ भरीमा ६२ ओटा बेचविखन सम्वन्धी सञ्जाललाई तोडिएको र ५०५ जनालाई उद्धार गरिएको प्रहरीले जनाएको छ । त्यसैगरी ३ हजार २१ जनाको नक्कली तथा झुटो कागजपत्रहरु नियन्त्रणमा लिइएको थियो ।
मोरोक्कलाई युरोप जाने माध्यमका रुपमा अफ्रिकी अवैध आप्रवासीहरुले प्रयोग गर्ने गरेका छन् । त्यसैले मोरोक्कोबाट धेरै आप्रवासीहरु पक्राउ पर्ने गरेका हुन् ।
कोरियामा ३० लाख कमाउने बिदेशी कामदार २५ प्रतिशत
सोल-दक्षिण कोरियामा आप्रवासी कामदारहरुको पारिश्रमिक पनि लोभलाग्दो रहेको पाइएको छ । सरकारी आँकडा अनुसार यहाँका श्रमिकहरुको न्युनतम पारिश्रमिक प्रति महिना २० देखि ३० लाख कोरियन वन रहेको छ ।
कोरियामा ३० लाख वन प्रति महिना आर्जन गर्ने आप्रवासी कामदारहरुको संख्या प्रति बर्ष करिव २५ प्रतिशतले वृद्धि भइरहेको छ । यो आर्थिक बृद्धिको प्रमुख कारक कोरियन सरकारले तोकेको अनिवार्य न्युनतम पारिश्रमिक सम्बन्धि नियम हो ।
कोरियाली सरकारी तथ्याङ्कका अनुसार हाल कोरियामा करिव ८ लाख ६३ हजार बैधानिक आप्रवासी कामदारहरु रहेका छन् ।
कोरियाली सरकारी तथ्याङ्कका अनुसार बैदेशिक आप्रवासी कामदारहरुलाई सबैभन्दा न्युन पारिश्रमिक दिइने गरेको छ ।
कोरियामा करिव १ लाख २४ हजार जना कामदारहरु (करिव ४३ प्रतिशत) हप्ताको ६० घण्टा काम गर्दछन् ।
त्यसै गरि हप्ताको ४० देखि ५० घण्टा काम गर्ने श्रमिकहरु करिव ५.६ प्रतिशत रहेका छन् भने हप्ताको ३० देखि ४० घण्टा काम गर्ने श्रमिकहरुको संख्या करिव १६.१ प्रतिशत रहेको सरकारी अधिकारीले बताएका छन् ।
कोरोनाको खोप एसियामा आउन एक बर्ष लाग्न सक्ने
विश्व स्वास्थ्य संगठन (डब्लुएचओ)ले एसिया प्रशान्त क्षेत्रमा कोरोनाविरुद्धको खोप आउन झण्डै एक बर्षसम्म लाग्न सक्ने जनाएको छ । संगठनले यस क्षेत्रमा तत्काल खोप पाउने सम्भावना कम रहेको र छ महिनादेखि एक बर्षसम्म लाग्न सक्ने बिहीबार बताएको हो । ढिला आउनुको कारण मध्ये एउटा मुख्य कारण खोपको विकास र प्रभावकारीताको अवस्था अझै पनि परीक्षणकै क्रममा रहनु हो ।
डब्लुएचओका क्षेत्रीय निर्देशक डा. ताकेशी कासाइले इन्डोनेसियाको राजधानी जाकार्तामा पत्रकारहरुसँगको कुराकानीका क्रममा यस क्षेत्रमा खोप आउन ढिला हुने बताएका हुन् । “कतिपय देशहरुले खोप ल्याउनका लागि सम्झौता गरेका छन्, तर अधिकांश देशले अझै पनि सुरु गर्न सकेका छैनन, उनीहरुले सन् २०२१ को मध्य तथा अन्त्यतिर मात्रै ल्याउन सक्ने देखिन्छ,” उनको भनाइ छ । अति उच्च जोखिममा रहेकाहरूलाई प्राथमिकता दिइने भएकाले उनीहरूले मात्रै पहिला पाउने पनि उनकाे भनाइ छ
भोलिदेखि सवारी साधनमा जोर-बिजोरको नियम नलाग्ने
भोलि शुक्रबारदेखि काठमाडौं उपत्यकामा सार्वजनिक तथा निजी सवारीमा लगाइएको जोर-बिजोर प्रणाली हट्ने भएको छ । बिहीबार जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौंमा बसेको सरकारोवाला निकाय र विभिन्न यातायात व्यवसायी र मजदुरका संघ संस्थाका प्रतिनिधिको बैठकले सार्वजनिक सवारीमा जोर-बिजोर कायम गर्दा झनै भीड बढेको निष्कर्ष निकालेको हो । जोरबिजोर हटाउने सहमतिसँगै भोलिबाट सबै सार्वजनिक तथा निजी सवारी सडकमा गुड्न पाउनेछन् । काठमाडौंका प्रमुख जिल्ला अधिकारी कालीप्रसाद पराजुलीका अनुसार तोकिएको स्वास्थ्य मापदण्ड पालना गरेर सबै सार्वजनिक र निजी सवारी चल्न दिने निर्णय भएको छ । ‘शहरमा बढेको यात्रुको चापलाई ध्यानमा राखेर शुक्रबारदेखि लागू हुनेगरी जोर-बिजोर प्रणाली हटाउने निर्णय भएको छ’, उनले भने ।
कोरोना महामारीपछि काठमाडौंका सडकमा घटेको सवारी चाप दिनदिनै बढ्दो दरमा छ । नेपाल यातायात व्यवसायी राष्ट्रिय महासंघसहित विभिन्न यातायात मजदुर संगठनले शुक्रबारबाट जोरबिजोर प्रणाली उल्लंघन गरेर सवारी चलाउने घोषणा यसअघि नै गरेका थिए । महासंघका महासचिव सरोज सिटौला लकडाउनपछि यात्रु पाउनै मुश्किल पर्ने सार्वजनिक सवारीमा अहिले कार्यालय समयमा ठूलो भीडभाड हुन थालेकोले जोर बिजोर हट्नु सकारात्मक भएको बताउँछन् । विगतमा भीडभाड कम गर्न जोर-बिजोर प्रणाली लगाए पनि अहिले अरु कुनै खालका प्रतिबन्धहरु नभएकाले अब जोर-बिजोर मात्रै लगाएर राख्दा सार्वजनिक सवारीमा जोखिम बढ्ने महासंघको भनाइ थियो
९१ वर्षमा हिमाल चढ्नेको यात्रा
जिन्दगी पहाड भएको थियो । जब मनमस्तिष्कमा पनि निमोनिया सवार थियो, तब शरीरको हाल कस्तो थियो ? नसोध्नुस् । शरीर बिरामी हुँदा सम्हाल्न पनि सकिन्छ होला । तर जब रोग मनमस्तिष्कसम्म पुुग्छ तब आश पनि बिस्तारै कमजोर हुँदै जान्छ । ती महिलासँग यही भइरहेको थियो । रोग नै त्यस्तो खतरनाक थियो । अमेरिकामा निमोनियाका कारण आज पनि धेरैले ज्यान गुमाउँछन्, त्यतिबेला त थप धेरै मानिस हार्थे । सास लिँदा फोक्सोले जबाफ दिन थाल्थ्यो । सासभित्र गयो, तब पीडा । बाहिर आयो, तब थप पीडा । पीडासँग यस्तो सम्बन्ध बनिसकेको थियो कि मृत्युले निशाना बनाइरहेको छ भन्ने लाथ्यो । जब डाक्टर पति नजिक हुन्थे तब के लाग्थ्यो भने कसैले जीवन थामिरहेको छ र छोड्नेछैन । तर जब पति दूर हुन्थे तब दिमागले सोध्न थाल्थ्यो– ‘अब अलबिदा गर्ने समय भइसकेको हो । अवस्था नियन्त्रणबाहिर गएको देखिरहेका पतिले एक दिन सम्झाउने प्रयत्न गरे । निराश पत्नीका काँपिरहेका औँला समाउँदै उनले बिस्तारै भने, ‘तिमी लड, तिमीले जित्नेछौ । तिमी ओछ्यानमा छौ ? हेर, बाहिर दुनियाँ बढिरहेको छ । पन्छी उडिरहेका छन् । रूख खडा छ । तिम्रो पछाडि हरियाली छ । झरना बगिरहेका छन् । पहाडबाट कसैले पुकार्दैछ । उठ, हिँडेर त देखाऊ । सबैलाई तिमी बाँच्न चाहन्छौ भन्ने थाहा होस् । केही समयकै लागि भए पनि उठेर बाहिर निस्किएर सबैलाई देख्नेछौ, तब तिमीलाई राम्रो लाग्नेछ ।
पतिले सम्झाएपछि केही हिम्मत आयो तर डर र थकानमुक्त हुन सहज थिएन । रगतको कमी बढ्दो अवस्थामा थियो । तर यो एक्लो भएको महसुस त थिएन । उठेर हिँड्न कमी–कमजोरीको एउटा पूरा सिलसिलासँग जुध्नुपर्ने थियो । तमाम कमजोरीलाई टाढा राखेर सुधारतर्फ एकएक कदम चल्नुुथियो । सबैभन्दा पहिले कोठाबाट निस्किएर बाहिर नियाल्नु जरुरी थियो ताकि केही तागत मिलोस्, मन–मस्तिष्कलाई रोगसँग लड्न लायक बनाउन सकियोस् । बाहिरको संसार निकै सजिएको थियो । कोही दिनरात ओछ्यानमा बस्दैमा यो संसारलाई के फरक पर्छ र ? सूूर्य त सधैँ उदाउँछ नै । तर कसैले झ्याल–ढोका बन्द गर्छ भने त उसलाई अँध्यारोबाट कसले बचाउन सक्छ ? अमेरिकामा एकसेएक सुन्दर पहाड छन् र कसैले उनीहरुलाई नजर लगाएन भने पनि पहाडको के नै जान्छ र ? प्रकाशलाई सजाउनुछ र पहाडलाई एक टकले हेर्नुछ भने उठेर अघि बढ्नैपर्छ ।
चौथो दशकमा जिन्दगी चलिरहेको छ । तर न कसरतको बानी छ न अकाङ्क्षा नै । यसैको भारी मूल्य अहिले निमोनियाले उठाइरहेको छ । भो पुुग्यो, अब त बाहिर निस्कनैपर्छ । उनी उठेर हिँड्न थालिन् तर घरकै आँगनमा केही कदम अघि बढ्नासाथ दम फुल्न थाल्यो । अरू हाँसेको देखेर कति दुःख लाग्थ्यो भने उनी आफू हिँडेको समय कसैले नदेखून् भनेर सोच्थिन् । बारम्बार थाक्ने, बारम्बार उठ्ने र हिँड्ने । बिस्तारै अभ्यास बढ्दै गयो । घर आसपासका जमिनमा हिँड्न थालिन् । जब उनी ५४ वर्षकी भइन् तब उनका श्रीमान् डाक्टर स्यामुअल क्रुक्स (जो एनाटोमीका प्रोफेसर थिए) बिते । हिँड्न प्रेरित गर्ने पति गुुमेपछि हिँड्नका लागि थप विवश भइन् । साना पहाडहरुमा हिँड्ने सिलसिला सुरु भयो । यसपछि एक दिन त्यस्तो पनि आयो, जब ६६ वर्षको पाको उमेरमा यी महिलाले अमेरिकाको त्यस समयको सबैभन्दा उचो पर्वत स्पर्श गरिन् । उनले क्यालिफोर्नियामा १४ हजार ५ सय फिट उचाइको माउन्ट ह्विट्नी चढिन्, त्यसपछि मानिसले यस पर्वतलाई नै ‘हजुुरआमा ह्विटनी’ भन्न थाले ।
केही वर्ष हिँडेपछि हिँड्नभन्दा दौडन मज्जा हुन्छ भन्ने यी महिलालाई थाहा भयो । उनले ७० वर्षको उमेरमा दौडन थालिन् । यसपछिका २० वर्षसम्म झन्डै प्रत्येक वर्ष उनले माउन्ट ह्विटनी आरोहण गरिन् । ९१ वर्षको उमेरसम्म आइपुुग्दा उनले २३ पटक यो पवर्तन चढ्ने कीर्तिमान बनाइसकेकी थिइन् । उनले जापानको माउन्ट फुजी चढ्ने सबैभन्दा ज्येष्ठ महिलाको कीर्तिमान पनि बनाइन्, ९१ वर्षको उमेरमा । आफ्नो शान्दार पर्वतारोही जीवनमा उनले ९७ वटा पर्वतमा कदम राख्ने कीर्तिमान बनाइन् । उनी १ सय १ वर्षसम्म जीवित रहिन् । प्रायः भन्ने गर्थिन्, ‘मैले केही सोचेर पहाड चढेको होइन । मैले त खुला स्थानको खोज र आफ्नो शरीर र आत्माको निर्माणका लागि यस्तो गरेँ । उनले आफ्नो जिन्दगीमार्फत लाखौँ मानिसलाई पहाड चढ्ने कुनै उमेर हुँदैन भन्ने कुरा बुुझाइन् । शरीर त्यस्तो नै बन्छ, जस्तो मनले चाहन्छ । मन सुुदृढ होस्, असम्भव केही छैन । मानिस निमोनियाका रोगी १० वर्ष मात्र बाँच्छन् भन्ने पनि गर्दथे तर १८९६ मा जन्मिएकी हल्डा क्रुक्सलाई ५० नपुुग्दै निमोनिया लागेको थियो । यद्यपि १ सय १ वर्षसम्म बाँचेर (१९९७ मा मृत्युु) उनले त्यस धारणालाई गलत साबित गराइदिइन् । संसारले देख्यो, कुनै समय पहाडजस्तै कठिन बनेको जिन्दगीमा यस्तो जोश जागेको थियो कि पर्वतारोहण नै जिन्दगी बनिसकेको थियो । रातोपाटी बाट साभार गरिएको हो ।
श्री नारी सञ्चार प्रा.लि. द्धारा सञ्चालित
NariBatika.com का लागि
कम्पनि दर्ता नं.: २६६२९३/०७८/०७९
पान नं.: ६१००३९६८९
सूचना विभाग दर्ता नंः २९११-२०७८/०७९
प्रेस काउन्सिल दर्ता नं. १८६
निलकन्ठ-३, मिलनटोल धादिङ्ग
वेब ठेगाना:- naribatika.com
संचालक / न्युज डेस्क: भगवती उप्रेती
सम्पादक: निरोज उप्रेती
संवाददाता: रविना मियाँ
सल्लाकार: अधिवक्ता,टंक कु.श्रेष्ठ
Copyright © २०७७-२०७८ Naribatika.com सर्वाधिकार सुरक्षित
Designed by GOJI Solution